Gam akporo Q ka enweghi aha doro anya ahọrọ | Gam akporosis
Google na-acho aha maka gam akporo Q
Edere Ferreno | | Noticias
Gam akporo Q bụ isiokwu nke izu. N'etiti izu a ka emere beta nke atọ nke sistemụ arụmọrụ, ya na otutu njirimara. Na mgbakwunye na iwebata usoro mgbanwe dị mkpa, esi ewepu Android Beam. A na-atụ anya na ọ ga-abụ n'ọnwa Ọgọst mgbe a ga-ebupụta ọkwa nke sistemụ arụmọrụ.
Ọ ga-abụ n'oge a mgbe anyị ga-amata ihe bụ aha ikpeazụ nke gam akporo Q. Ọ bụ ezie na ọ dị ka n'oge a, Google na-enwe ọtụtụ nsogbu ịchọta aha ikpeazụ nke ụdị sistemụ arụmọrụ. Companylọ ọrụ ahụ kwetara nke ahụ ha na-achọ aha.
Dị ka anyị kwurula, Google na-ahọrọkarị aha sistemụ arụmọrụ dabere na desserts ma ọ bụ sweets, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ nwere nhọrọ maka desserts. N’agbanyeghi n’okwu a, ha nwere nsogbu ichota nke na-amalite site na mkpuru edemede Q. Ya mere maka ugbu a Ha na-acho aha maka gam akporo Q.
Na net ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ntụnye gbasara ya, site na Quaker Oaks, Quesillo ma ọ bụ quesadilla, na quinoa. Mana ugbu a anyị amaghị ma ọ nwere onye n'ime ha ga-abụ nke ụlọ ọrụ America họpụtara n'ikpeazụ. Ọ bụ ezie na oge na-agba ọsọ, n'ihi na n'ime ihe karịrị ọnwa atọ ọ kwesịrị ịbụ ọchịchị.
N'afọ a aha a ga - eji gam akporo Q bụ ezigbo ihe omimi. tumadi na Oreo, aha a ga-eji mara ọnwa ole na ole tupu e wepụta ya. Mana afọ a bụ ọnọdụ siri ike maka ụlọ ọrụ ahụ, nke na-enweghị aha achọrọ.
Anyị ga-ahụ mgbe aha gam akporo Q gosipụtara n'ikpeazụ. Tentdị nke iri nke sistemụ arụmọrụ, ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ, nke na-ekwe nkwa iwebata ọtụtụ mgbanwe na ya maka afọ a. Aha dị a theyaa ka ha kwesịrị iji na nsụgharị a dịka ị si kwuo?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google na-acho aha maka gam akporo Q
Samsung's Galaxy Home enweela ụbọchị mwepụta